खगेन्द्र थापा मगर - विश्व मा सबै भन्दा कम व्यक्ति (2010-2011 GG।)। उचाइ, तौल खगेन्द्र थापा मगर
सबै भन्दा कम वृद्धि - 57 सेन्टिमिटर - पहिलो आधिकारिक "गिनीज, रेकर्ड को पुस्तक" भारत, नयाँ दिल्ली निवासी, मोहम्मद राजा को एक नागरिक दर्ता भएको थियो। 1997 मा सबै भन्दा कम वृद्धि को होल्डरलाई, उहाँले चालीस वर्षको हुँदा, अत्यधिक धूम्रपान कारण श्वसन विफलता को मृत्यु भयो।
बीच ग्रह मा सबै भन्दा लामो-बस्ने लघु मानिस एक भारतीय-नेपाली, चन्द्र Dangi एक रिमोट गाउँमा पत्ता रूपमा मान्यता थियो। 54 र आधा सेन्टिमिटर र तौल 12 किलो को वृद्धि संग, आफ्नो जीवन भर मानिस एक, स्वस्थ सक्रिय र कुशल थियो। बुनाई पक्रने, Dungy परिवार र यात्रा बारे सपना देख्यो। एल्डरले जीवनमा दोस्रो सपना महसुस गर्न सक्छ, भएदेखि यसको अस्तित्व खुलेको छ। 2015 मा, नयाँ रेकर्ड होल्डर नेपाली खगेन्द्र थापा मगर, 67,08 सेमी को स्तर मा तय छ वृद्धि जो, पहिले नै शीर्षक र प्रसिद्धि जित्यो छ जब एक समयमा, चन्द्र Dangi निमोनिया को सामोआ मा मृत्यु भयो।
स्वामित्व महाराष्ट्र भारतीय महिला ज्योति Amge महिला विश्व च्याम्पियनशिप मा सानो बीचमा। 2014 मा, साना ज्योति यसको वृद्धि 61,9 सेमी थियो जब "संसारको सबभन्दा सानो नारी" को शीर्षक लागि मनोनीत गरिएको छ।
जीवन र परिवार खगेन्द्र थापा मगर
संसारमा सानो मानिस 2010-2011 मा। खगेन्द्र थापा मगर - पनि, हिन्दुस्तान को एक निवासी थियो। त्यतिबेला यसको वृद्धि तीन छोराछोरीको वृद्धि बराबर छ जो सिर्फ 67,08 सेमी, मा निश्चित थियो।
1992 मा उहाँले मात्र 600 ग्राम वजन भएको हिमालय खगेन्द्र थापा मगर, मा जन्म भएको थियो। आफ्नो प्रसिद्धि को समय उहाँले5र आधा किलोग्राम हासिल। Crumbs आमा Dhana माया गर्ने नवजात उनको पाम मा राखिएको थियो, र उनको बुबा, मगर सानो पुरानो, यो आफ्नो खल्ती मा लगाएका गर्दा स्वीकारे। अब बौना-च्याम्पियन आफ्नो परिवारका साथ नेपाल बाग्लुङ जिल्ला बसोबास, र जो आफ्नो नाम साना बुद्ध छ। उहाँले जसको वृद्धि छैन पारंपरिक विकास परे जाने गर्छ एक भाइ, छ। खैर, भाइहरूले बीच यस्तो मतभेद आफ्नो सम्बन्ध असर छैन।
आमाबाबुले undersized किशोरी थापा मगर - गाउँलेहरू र फल खेत मालिक - आफ्नो सानो कद को लागि कारण थाहा र वृद्धि जारी हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए गर्नुभयो। सानो नेपाली खगेन्द्र थापा मगर किनभने undeveloped बोली, संसार र व्यवहार एक बच्चाको धारणा को स्कूल उपस्थित भएन, र5वर्षीय बच्चाहरु संग बराबरीको मा एक किंडरगार्टन गए।
उहाँले जहाँ पाल्तु जनावर दिग्गज हुन थाल्छ र बनाउन छ साना मान्छे ठूलो संसारमा बाँच्न खतरनाक छ कसरी बताउँछ रेबीज विरुद्ध शट कारण कुकुर बाइट्स गर्न। Hagendra तर निरुत्साहित र अभिभावकको हेरविचार र माया जीवनको बारेमा हास्य अनुमति दिन्छ। उहाँले एक मान्यता सेलिब्रिटी छ विशेष गरी रूपमा। मानिसहरू असल-natured उहाँलाई हो, सडक मा उपहार, चर्को चियर्स दिन र आशिष सोध्नुहोस्। उहाँले एक पत्नी फेला पार्न चाहन्छ।
Titulonosets - खगेन्द्र थापा मगर
आफ्नो जन्मदिन, खगेन्द्र थापा मगर, फोटो जो तपाईं लेखमा देख्न सक्नुहुन्छ मा, मा भर्ना गरिएको थियो "रेकर्ड को गिनीज बुक।" यो दिन मा, आफ्नो उचाइ अन्तिम औसत प्राप्त गर्न तीन पटक मापन गरिएको थियो। नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन को एक वर्ष, 2011 मा आफ्नो देश को च्याम्पियन प्रतिनिधि लागि सद्भावना राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। यो देश घन्टी नारा गढा गरिएको छ पर्यटकहरु आकर्षित गर्न "संसारमा सानो मानिस तपाईं धेरै उच्च पहाड भ्रमण गर्न निम्तो दिनुहुन्छ।" आखिर, 8848 मीटर को सगरमाथा उचाइ नेपाल स्थित छ।
"गिनीज विश्व रेकर्ड" नियममा स्थापना: एक उम्मेदवार बहुमत को उमेर पुगेपछि मात्र पहिचान को शीर्षक हुन्छ - 18 वर्ष। रेकर्ड र प्राकृतिक मान संग्रह मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दैन, तर प्रकाशन कारण र असामान्य मान्छे को स्थिति जाँच्न र चिकित्सा उपायहरु को एक नम्बर पकड गर्न सक्षम हुनेछ जो चिकित्सा विशेषज्ञहरु र वित्तीय सहायता, को ध्यान आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले Hagendra मगर राज्य खर्च मा अमेरिका सञ्चालन मा अनुभव "रेकर्ड को बुक" को टाउको, अनुसार, डाक्टर र अमेरिकी देखि चिकित्सा सल्लाह पाए। नेपाली बच्चा "primordial dwarfism" संग निदान, rudimentary छ, वा जन्मजात dwarfism।
को निदान को विशिष्टता
primordial dwarfism लागि बिल्कुल सानो शरीर आकार र धेरै कम वृद्धि गतिशीलता द्वारा विशेषता। dwarfism समानुपातिक, टाउको र शरीर को limbs संग विरामीहरु मा निर्माण आकार अनुरूप, तर शरीर को विकास र विकास मान्यता बाल्यकाल अनुरूप। एक बच्चा समयमा जन्मिएको छ, तर एक सानो वजन र उचाइ (500-1500 ग्राम, र 20-25 सेमी, क्रमशः) र थप संग हर्मोन विकार बिना स्वाभाविक विकास। यो विकृति पूर्णतया बुझेनन् छ, तर त्यहाँ utero मा, मुख्य endocrine ग्रन्थीहरूको, pituitary ग्रंथि को अपर्याप्त परिपक्वता बारेमा परिकल्पना छ। आनुवंशिक असामान्यता वंशानुगत छैन, तर यो निदान संग सानो मान्छे midgets रूपमा वर्गीकृत छन्।
साना बुद्ध को विश्व भ्रमण
सुदूर अष्ट्रेलिया संसारको रेकर्ड भ्रमण पहिलो बिन्दु बनेको छ। 2012 मा Hagendra फ्रान्स एक यात्रा मा भयो, पेरिस भ्रमण र मुख्य सडकमा मार्फत एक पैदल लिन। उहाँले विशेष गरी दूध संग चिया मन परायो। एक वैश्विक विशाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसले आफूलाई फिट गर्न बुट सक्छ जो मा बस्ने - विश्व यात्रा "केटा-संग-औंला" को रूपमा जहाँ संग्रहालय रबर्ट Wadlow को मुर्ति संग बन्द सामना न्यूयोर्क, गए। पनि बच्चा Hagendra को ऊंची गगनचुम्बी भवन भ्रमण साम्राज्य राज्य भवन र अमेरिकी राष्ट्रिय पकवान, धेरै खुसी थियो जो एक हट डग, खोजे।
पहिले र खगेन्द्र थापा मगर पछि
अघिल्लो रेकर्ड गर्ने 183Hagendra भन्दा लामो सेमी (70 सेमी) को उमेर सम्म वृद्धि कोलम्बियाई बौना र एडवर्ड Nino Ernandosu अभिनेता belonged। सानो नेपाल बुद्ध शीर्षक Junro Balauinga यसको 18 औं वार्षिकोत्सव मात्र7सेमी वृद्धि बौना नेपाल भन्दा कम द्वारा 59,9 सेमी वृद्धि जो फिलिपिन्समा, को दक्षिणी सीमाना क्षेत्रका द्वारा overtaken।
टापा Magara जीवन देखि रोचक तथ्य
जीवनमा खगेन्द्र थापा मगर निम्न देखा रोमाञ्चक घटनाहरू:
मगर द्वारा ब्रिटिश निर्देशक मार्क Dolan गरेको "म र दुनिया मा सानो मान्छे" फिल्म तारा अङ्कित र टेलिभिजनमा विशेष थियो।
धेरै अवसरमा छोराका आमाबाबुले ग्रहमा पहिचान Hagendry सबैभन्दा छोटो मानिस लागि लागू गरेका छन्, तर आफ्नो उमेर को कारण इन्कार गरेका थिए।
एक सेन्टिमिटरले स्थानीय बुद्ध मगर भन्दा उच्च थियो Mohhameda Gi compatriot, को मृत्यु पछि को शीर्षक लागि दावेदार हो "सबै समय को मिनी-मानिस।"
त्यस्तो एक रोचक र धनी जीवन खगेन्द्र थापा मगर हो। उहाँको उदाहरण, हामी आफ्नो जीवनमा पनि सानो मान्छे "ठूलो" बन्न सक्छ भनेर। यसलाई खोल्न, र वरिपरि यो कुरा समय सुरु - प्रत्येक व्यक्ति विशेष कुरा, मुख्य कुरा हुन सक्छ!
अभिनेता zhan Roshfor: Filmography, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
Vadim Galygina पत्नी ओल्गा Vaynilovich। तेस्रो पटक विवाह Galygin
अभिनेता कासपर भ्यान Dien: जीवनी, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
चार्ली वाट्स: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
Aleksandra Nazarova: जीवनी, Filmography र परिवार Actresses
फिनिस आइस हकी खेलाडी Barkov Aleksandr: खेल मा जीवनी र क्यारियर
भयानक छुट्टी दिन वायु सेना को - सबै के नम्बर थाहा छैन!
जूलिया Gnuse: ट्याटु कैद
कसरी कलम संग कागज को पाना मा एक Guessing सञ्चालन गर्न?
पैट्रिक Dempsey (पैट्रिक Dempsey): जीवनी, Filmography र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
धेरै सय वर्ष बसोबास गर्ने एक रूख - को ओक बारेमा पहेलियों
स्रोत-बचत प्रविधि। औद्योगिक प्रविधि। प्रविधि नवीनतम
माछा लागि स्वचालित feeders - तपाईं समय बचत गर्न
Rey Kuni: जीवनी र काम
एक जादूगर कसरी बन्न? अज्ञात सीमा बाहिर पहिलो कदम
भोल्युम कम फाइलहरू जगेडा
आयरल्याण्ड इतिहास, सुविधाहरू, संरचना र आकार को जनसंख्या
साराटोभ मा चिडियाघर petting